के एप्पलले नयाँ एप्पल पेन्सिलको साथ छाप छोडेको छ? | म म्याकबाट हुँ
के एप्पलले नयाँ एप्पल पेन्सिलको साथ छाप छोडेको छ?
एप्पलले उत्पादनको नयाँ शस्त्रागार ल्याएको केही दिन पछि यो एक हप्ता हुनेछ। म म्याकबाट म यी उत्पादनहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्षम हुन "KitKat" बनायौं र हाम्रा पाठकहरू, यद्यपि हामी म्याकलाई समर्पित ब्लग हौं, तिनीहरूलाई यो पहिलो हप्तामा सबै कुराको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ।
हामीले पहिले नै केनोटमा प्रस्तुत गरेको लगभग सबै चीजको बारेमा अघिल्लो बुधबार कुरा गरिसकेका छौं। आईफोन, नयाँ एप्पल टिभी, आईक्लाउड भण्डारण र नयाँ आईप्याडका लागि नयाँ मूल्यहरू, आईप्याड प्रो र आईप्याड मिनी about को बारेमा समाचारहरू थिए। यद्यपि यो केवल त्यस्तो मात्र थिएन जुन त्यहाँ नयाँ धातुको संकेत पनि थियो। एप्पल वाच को लागी समाप्त, नयाँ पट्टि, आईप्याड प्रो, को लागि फेसन र सहायक कम्पनीहरूसँग साझेदारी स्याउ पेन्सिल र स्मार्ट किबोर्ड।
यी अन्तिम दुई मध्ये एक हामी यस लेखमा कुरा गर्न चाहन्छौं, एप्पल पेन्सिल। लामो समयको लागि सबैभन्दा व्यावसायिक क्षेत्रले एप्पल कम्पनीबाट इलेक्ट्रोनिक पेन्सिलको माग गर्यो किनभने अन्य निर्माताहरूले धेरै बनाएका छन् मिल्दो मोडेलहरू तपाईको आईप्याडको साथ उत्तम रूपमा लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक पेन सिर्जना गर्न कपर्टिनो भन्दा राम्रो कोही पनि छैन।
तथ्य यो हो कि कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धाको कारण एप्पलले प्रयोगकर्ताहरूको त्यो खण्डमा ध्यान दिने निर्णय गरेको छ र आईप्याड प्रो सुरू गर्‍यो। यद्यपि हामीले धेरै पटक हाम्रो टाउकोमा हात राखेका छौं जुन हामीले एक पटक देख्यौं। अधिक विरोधाभास मूल आईफोनको प्रस्तुतीकरणको साथ २०० 2007 मा स्टीभ जॉब्सले भनेका शब्दहरू। Years बर्ष अघि स्टीव जॉब्सले घोषणा गर्‍यो कि एप्पलले कैसियोको पीडीएमा जस्तो स्टाइलस कार्यान्वयन गर्ने छैन, उदाहरणका लागि।
उसले घोषणा गर्‍यो कि मूल आईफोनले त्यस क्षणको सब भन्दा सटीक पोइन्टर प्रयोग गर्नेछ, जुन हाम्रो औंला थियो। त्यस समयमा नयाँ लागू गरिएको स्क्रीन प्रस्तुत गरिएको थियो त्यो आईफोन मोडेलमा, एक स्क्रिन जसमा बहु-टच इशाराहरूले यसलाई अद्वितीय बनायो। त्यसोभए ... किन एप्पल आईप्याड प्रो को लागी एप्पल पेन्सिल संग फर्कियो?
यदि हामी प्ले चिसो विश्लेषण गर्न रोक्छौं भने हामी देख्न सक्छौं कि एप्पलले वास्तवमा पेन्सिलको साथ आईप्याड निकालेको छैन। यो एक आईओएस overhaul र बहु ​​स्पर्श इशाराहरू मा सुधारको साथ एक सुधारिएको स्क्रीन संग एक ठूलो आईप्याड, जारी गरेको छ। जहाँसम्म, आईप्याडको फ्रिहन्ड प्रयोग चाहिनेहरूका लागि उनीहरूले ACCESSORY बोलाएको छ एप्पल पेन्सिल केवल उनीहरूको लागि जस्तै शारीरिक किबोर्ड चाहिन्छ ACCESSORY स्मार्ट स्मार्ट किबोर्ड भनिन्छ। दुबै केसहरूमा एक विशाल हार्डवेयर ईन्जिनियरिंग कार्य गरिएको छ ताकि यसको प्रयोगको परिणाम राम्रो हो।
अब, आईप्याड प्रो प्रयोग गर्न सक्षम हुन एप्पल पेन्सिल प्रयोग गर्न अनिवार्य छैन। यो एक सरल सहायक छ कि यसले के गर्छ केही निश्चित संख्याका प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकतालाई प्रतिक्रिया गर्दछ। यसैले हामी भन्छन कि स्टीभ जॉब्सको आत्मा अझै छ जबकि त्यहाँ विकसित चीजहरू छन् र यसका लागि एप्पल पेन्सिल सिर्जना गरिएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » आईप्याड » के एप्पलले नयाँ एप्पल पेन्सिलको साथ छाप छोडेको छ?
सर्जियो रिक्वेना भन्यो
स्टाइलस: पर्दामा आइकनहरू छुनेको लागि प्लास्टिक पोइन्टर।
पेन्सिल: इलेक्ट्रोनिक उपकरण (यहाँबाट चार्जिंग पनि चाहिन्छ) जुन सटीकताका साथ DRAW मा कार्य गर्दछ।
मलाई लाग्छ यो बुझ्नको लागि एकदम सजिलो छ।
सर्जियो रिक्वेनालाई जवाफ दिनुहोस्
१० बर्ष पहिले सबै टच उपकरणहरू एक आवश्यक प्लास्टिक वा धातु ग्याजेटको साथ आउँदछन् जसको कार्यहरू मात्र स्क्रिनमा हिट गर्नु थियो, किनभने तपाईको औंलाहरूले यो असम्भव थियो।
यो एक थप ग्याजेट हो कि धेरै विशिष्ट कार्य गर्दछ जुन तपाईं औंलाले गर्न सक्नुहुन्न, तर यो उपकरणको कुनै पनि प्रकारको प्रयोगको लागि आवश्यक सहायक छैन। मलाई लाग्छ कुनै असंगति छैन। जस्तो कि अब, त्यहाँ भौतिक कीबोर्डको विकल्प भएको रूपमा, हामी भन्छौं कि यो ब्ल्याकबेरीलाई सम्झनको लागि एक चरण पछाडि हो जब एक बिहान कफी जॉब्सले भने कि भौतिक किबोर्ड ढिलाइ हो ...
चार नयाँ एप्पल विज्ञापन आविष्कार कोटी प्रचार गर्न कलाकारहरूको साथ पोस्ट
Apple TV4चाँडै नै केही अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूको लागि आउँदैछ